Tuulooyin laga xoreeyay xukunka al-Shabaab
Ciidammada Xoogga Dalka oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa howl-gallo ku xoreeyeen deegaanno hoostaga Jalalaqsi ee Gobalka Hiiraan. Howl-gal qorsheysan oo ka dhan ah ururka nabad-diidka ee al-Shabaab ayaa laga sameeyay deegaannada Buurweyn, Dibiley, Faaxaale iyo deeganno kaloo ka tirsan Gobalka Hiiraan.
Dadweynaha ku dhaqan degmooyinkaas siiba dhallinyaro is abaabushay ayaa ka qeyb-galay howl-galladaas, kuwaasoo sheegay in ururka dilaaga ah ee al-Shabaab uu ummadda aad u dhibaateynayay, waxayna sheegeen inay hanjabaadyo joogta ah ay kala kulmayeen kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab. Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab waxaa ka hor imaadsan dadweynaha ku dhaqan tuulooyinka uu weli ururku ka arrimiyo maaddaama uu aad u dhibaateeyo ummadda.
Inta weli howlgalka la qaadin ka hor, dadweynaha dadweynaha ayaa soo gudbiyeen cabasho ku aaddan dhibaateynta ay kala kulmaayeen ururka al-Shabaab iyo xukunkooda gurracan. Howl-galkaas waxaa lagu dilay dhowr xubnood oo ka tirsanaa ururka al-Shabaab halka kuwa kalana lagu dhaawacay. Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab taageero siyaasadeed ugama sugnaanin dadweynaha Soomaaliyeed maaddaama ururku diinta suuban ee Islaameed uu ku been abuurtay.
Sidoo kale Ciidamada Amniga oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay xubin ka tirsan argagixisada al-Shabaab oo maleegayay qaraxyo lagu waxyeeleynayo shacabka, sida ay sheegeen saraakiisha amniga ee dowladda Soomaaliyeed.